Cali Guudlaawe oo dalka kusoo laabtay si weyna loogu soo dhaweeyay Muqdisho (Sawirro) | Allbanaadir.com
Home HIRSHABELLE Cali Guudlaawe oo dalka kusoo laabtay si weyna loogu soo dhaweeyay Muqdisho...
Cali Guudlaawe oo dalka kusoo laabtay si weyna loogu soo dhaweeyay Muqdisho (Sawirro)
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen iyo xubno la socday ayaa maanta dib ugu soo laabatay dalka gara ahaan Muqdisho, kadib howlo shaqo oo uu dibada ugu maqnaa.
Cali Guudlaawe waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade kusoo dhaweeyay xubno katirsan xildhibaanada labada Aqal, Wasiiro heer federaal ,qaar kamid ah Wasiirada iyo Xildhibaanada Hirshabeelle, Saraakiil iyo Masuuliyiin kale.
Madaxweynaha Hirshabelle ayaa Magaalada Muqdisho u yimid ka qeybgalka caleemasaarka Madaxweynaha cusub ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo lagu wado in berri oo Khamiis ah lagu qabto teendhada Afisiyooni.
Waxaa maanta sidoo kale la filayaa in magaalada Muqdisho soo gaaraan qaar kamid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo wafuud kale oo heer caalami ah kuwaa oo ka qeyb galaya caleemo saarka Madaxweyne Xasan Sheekh.
Previous articleAl Shabaab oo shaacisay in qarax ku dileen Injineer u dhashay dalka Shiinaha
Next articleMadaxweyne Laftagareen oo Guddoomiyaal cusub u magacaabay Gobolada Baay iyo Bakool